तिथि मेरो पत्रु » आफ्नो पूर्व फिर्ता जाओ पांच तरिका.
आफ्नो पूर्व फिर्ता जाओ पांच तरिका.
त्यसैले तपाईं गडबड? दी उहाँलाई लगे? पर्याप्त तिनीहरूको आवश्यकता चासो र तपाईंको सम्बन्ध आवश्यकता देखाउन थिएन? आफ्नो जीवनको प्रेम खोया र तपाईं उसलाई फिर्ता चाहनुहुन्छ? यो फेरि आफ्नो भरोसा प्रवेश गर्न गाह्रो सडक हुन गइरहेको छ तर यो राम्रो तरिकाले लायक छ. आखिर यो एक आफ्नो जीवनको प्रेम भेट्छन् र तिनीहरू वास्तवमा आफ्नो भावना यस्तै हरेक दिन होइन. गति-डेटिङ जाने मान्छे लामो सूची, आदि … तपाईं यस मानिसमा फेला के दुर्लभ छ भनेर देखाउन पर्याप्त छ. तर तपाईं सबै सबै तयार जान्दछन् र तपाईं आफ्नो काखमा पकड वा तिनीहरूलाई कुरा सक्दैन किनभने अहिले सर्वथा भयानक महसूस गर्दै. तर सबै गुमाए छैन. तपाईं कम से कम तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न आफ्नो मुश्किल प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र संभावना बलियो प्रेम वहाँ थियो भने यो अझै पनि आफ्नो पक्षमा हुनेछ भन्ने छ. तपाईं के गर्न आवश्यक सबै उनि शायद तपाईं बनाउन कोशिश गर्दै छन् जस्तै यो बाहिर पसीना र तिनीहरूले तपाईं मतलब के ठीक देखाउन आफ्नो मुश्किल प्रयास छ. यहाँ जो मा तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ केही तरिका हो कि मान्छे र gals!
1. किन तपाईं तिनीहरूबाट तपाईं के मार्ग उपचार बुझाउन
उहाँले तपाईंलाई हल्कासित लैजानुभयो किन शायद रूपमा भ्रमित अथवा नराम्रो व्यवहार गरिएको छ. यो जरूरी तपाईं गरे किन केही विस्तृत कहानी बनाउन आवश्यकता भन्ने होइन. यो इमानदार हुन अर्थ. यो तपाईं जवान थिए कि हुन सक्छ, के तपाईं यो छउन्जेल थियो वा कारण कुनै पनि नम्बर के महसुस गरेनन्. कुनै एक सिद्ध छ र तिनीहरूले साँच्चै तपाईं प्रेम भने तिनीहरूले पनि तपाईं बारेमा घृणा सबै कुराहरू लागि तपाईंलाई माया गर्नेछन्. तर संचार अक्सर सम्बन्ध मा एक प्रमुख बाधा छ. के तपाईं के गरे किन तिनीहरू बुझ्न आवश्यक. तपाईं तिनीहरूलाई कि प्रबन्ध गर्नुपर्छ र तिनीहरूले तपाईं साहसी थिए भनेर आफ्नो इमानदारी र वास्तवमा मूल्यांकन र तिमी गलत थिए भनेर स्वीकार गर्न पर्याप्त परिपक्व हुनेछ.
2. तिनीहरूसित सम्पर्क रहनुहोस्
जाहिर यस तिनीहरूले तपाईं संग सम्पर्क बस्न चाहँदैनन् सक्छ किनभने एक मुश्किल छ. अनि तपाईं कि सम्मान छ. तर तपाईं देख्न बस भने उनीहरूलाई केही शब्दहरू नमस्ते भन्न र. तपाईं तिनीहरूलाई बिर्सेको छैन भन्ने देखाउन. तपाईं बल अब आफ्नो अदालत मा छ आदर गर्छौं भनेर तपाईंलाई हेरचाह र तपाईं तिनीहरूलाई समय बिताउन चाहन्छन् भनी तर तिनीहरूलाई देखाउन.
3. तपाईं खेद तिनीहरूलाई बताएँ
यो एकदम सरल देखिन्छ तर यो अक्सर एक व्यक्तिले लागि संसारको सबैभन्दा कठिन कुरा हो. अन्य तर्फ पनि अक्सर सम्म यो भन्न मानिसहरू त्यहाँ छ. तपाईं यहाँ एक सन्तुलन प्रहार गर्न आवश्यक. यो हार्दिक र निष्कपट हुनु आवश्यक. तपाईं साँच्चै तपाईं उनलाई गरेका छन् के को लागि खेद भनेर देखाउन आवश्यक. तिनीहरूलाई चोट लागि. अनि तपाईंले पछुताउनु भनी प्रमाणित गर्न आवश्यक र तिनीहरूले यो समय तपाईं फिर्ता लिन भने कुरा फरक हुनेछ. यो बस खाली शब्दहरू हुन सक्दैन. तिनीहरू सीधा तपाईं को माध्यम देख्नेछन्.
4. तपाईं परिवर्तन गरेको देखाउन
स्पष्ट छ कि कुनै अर्थमा हुनेछ किनभने यो एक व्यक्तिको रूपमा होइन. यो गरे जो एक व्यक्ति उहाँको पछि सबै पहिलो स्थानमा तपाईं संग प्रेम पर्नु रूपमा तिमी को हो थियो. यो तपाईं अलग पहिलो स्थानमा दुवै तपाईं चलाए कि यी नकारात्मक पक्षहरू बदलिएको छ भनी प्रमाणित अर्थ. तपाईं अब गलत गए जहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन आवश्यकता हो र तपाईं यसलाई देखि सिकेका.
5. उहाँलाई लागि लडाई
तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा रोमान्टिक कुराहरू एउटा तपाईं प्रेम मानिसको लागि लड्न छ. तपाईं मात्र तपाईंलाई रुचि विरोध या कल्पना सबै रूप पछि प्रेम कसैले लागि लड्न. अनि तपाईं तिनीहरूलाई लागि लडिरहेका र तिनीहरू हुन् भनी देखाएर तिमी मामलाहरु सबै अब तपाईंले तिनीहरूलाई प्रेम कति साबित गर्दै. तिनीहरूलाई इमानदार हुनुहोस्. तपाईं आफ्नो जीवन को एक विशाल भाग हराइरहेको छ र तपाईं अतुलनीय पीडित छन् कि जस्तै महसुस. लाइन मा आफैलाई राख्न तयार हुनुहोस् र आफ्नो गौरव बाटो मा प्राप्त गरौं छैन. कुनै एक कुशलता मा आफ्नो गर्वका साथ एक्लो छोडेर चाहनुहुन्छ.
3 उत्तम अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल सिर्जना ठूलो टिप्स
12 सफल एकल लागि सुझाव